Kedu ihe bụ Akaụntụ Offshore & Gịnị Mere M Ji Kwesịrị Inwe Otu?
Order Ugbu a
Na: + 1-661-310-2929
Na-eme ka ụlọ ọrụ, Ụlọ akụ, Atụmatụ, na Akaụntụ Banyere Akaụntụ · Ebe ọ bụ na 1906
Azịza Eziokwu site na Ndị Ọkachamara Ahụmahụ
Jụọ ajụjụ banyere akụ na ụsọ oké osimiri, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nchebe ego na isiokwu ndị metụtara ya.
Kpọọ Ugbu a 24 Hrs./Day
Ọ bụrụ na ndị ọkachamara nọ n'ọrụ, biko kpọọ ọzọ.
Akaụntụ Banklọ Ahịa N'ahịa: Gịnị ka ọ bụ? Gịnị Mere Nwere?
Ihe mbụ ị ga-aghọta mgbe ị na-atụle mbupụ ala bụ na o yiri nnọọ ka ịkwụsị akụ n'okporo ụzọ. Nwere ike ilele akaụntụ gị n'ịntanetị. Nwere ike ibunye mbufe akụ n’ụlọ akụ na n’ime ya. Ọtụtụ akụ ndị dị n'akụkụ mmiri nwere kaadị debit metụtara akaụntụ ahụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ọrụ na mpụga na-enye kaadị debit ịpụghị ụgwọ nke ị nwere ike ijikọ na akaụntụ nnabata gị.
Dị ka ị maara, akaụntụ mpaghara anaghị enwe obere mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ echekwara n'ime oghere cubby nke aha gị na ya. Ihe ndekọ ego nke ụlọ akụ gị bụ naanị data kọmputa na netwọ akụ nke nchekwa na sava dị gburugburu ụwa.
Ọ bụrụ n’inwe njem gaa mba ọzọ n’oge ezumike, ị ka ga-enwe ike ịnweta akaụntụ gị, wepu ego, wdg N’otu aka ahụ, akaụntụ akụ gị esenidụt nwere koodu kọmputa; ikekwe kwadoo n'otu komputa komputa zuru uwa niile dika nke enyi obodo gi.
Yabụ, ọdịghị mkpa ọ bụla ma ị daa n'ala n'akụkụ akụkụ ọzọ nke mbara ụwa. Nke ọ bụla, ego gị dị na otu ebe: na netwọ kọmputa kọmputa zuru ụwa ọnụ.
Nchekwa Banking na mbupụ
Banyere nchekwa akụ, buru n'uche na enwere ụkpụrụ ego mba ụwa nke ụlọ akụ ga-ezurịrị. Nke ahụ bụ, tupu ụlọ akụ nwee ike ịnabata ndị na-ebubata ego site na mba ọzọ ọ ga-agafe ụfọdụ ule nrụgide ego. Dịka ọmụmaatụ, tupu ụlọ akụ dị na Belize, Nevis, Cook Islands, Switzerland ma ọ bụ agwaetiti Cayman nwere ike ibufe nnyefe waya na dollar US, ọ na-adịkarị mkpa ịnweta ụlọ akụ na-ezigara ndị ozi US. Inweta mmekọrịta ụlọ akụ na-ezirịta ozi na-ebu ụfọdụ ihe achọrọ. Iji maa atụ, ọ gha gosipụtara ụlọ ọrụ US na ike ike ego ya na-agbaso usoro mba dị iche iche. Ọzọkwa, ọ ga-aga n'ihu na-agafe ule ndị a iji nọgide na-enwe mmekọrịta.
Na mgbakwunye, enwere iwu gọọmentị siri ike n'ime ikike ndị a. Otu ihe siri ike ma na osooso a choro bu na ulo ogwu aghaghi idobe nchekwa nke ukwu. Ọzọkwa, ndị na-achịkwa na-atụle nyocha akụ. Nke a na-enyere aka inyocha mkpuchi na ụlọ akụ na-anọgide na nrube isi na ịkwado aha nke ụlọ ọrụ ego a ma ama. Enwere ikike na ọnụọgụ, ọnụọgụ na nchekwa achọrọ maka mgbazinye ego ụlọ akụ na itinye ego. Enwere akụkọ ịkọwa nke nkeji iri na ise. Ọzọkwa, ndị ọrụ akụ ga-agafe nyocha nke ukwuu tupu ha enwe ike ịnweta ụlọ ọrụ na kọmitii ahụ.
Usoro & Iwu
Enwere usoro nhazi nke mba dị iche iche maka ụlọ akụ. Ndị a bụ ụkpụrụ iwu nke ụlọ akụ niile dị n'ụwa niile kwesịrị ịgbaso iji kesaa ego na mba ofesi. Nke a gụnyere Basel III. Basel III bu ihe nlebara anya zuru oke. Kọmitii Basel na-ahụ maka Nchekwa Banking mepụtara ụkpụrụ ndị a maka ụlọ ọrụ. Ebumnuche ya bụ ịkwado ma jikọta iwu, nlekọta na njikwa ihe egwu nke ụlọ ọrụ ụlọ akụ gburugburu ụwa. Ebumnuche nke usoro ndị a bụ ime ihe ndị a;
Mee ka ụlọ ọrụ ụlọ akụ na-enwe ike ịmalite ịmalite na-akpata nsogbu nke akụ na ụba na nke akụ na ụba, ọ bụ ezie na isi iyi ahụ
Gbanwee njikwa, arụmọrụ na nlekọta
Mee ka ikpo okwu kwusi ike na nkwuputa
Enwere ụkpụrụ mba ụwa maka Liquidity Coverage Ratio na ngwaọrụ nlekota ihe ọghọm nke ụlọ akụ ga-enwerịrị. Ọ na - eme nke a site na ijide n'aka na ụlọ akụ na - akwụ ụgwọ nwere ego zuru oke na - enweghị ikike nchekwa mmiri (HQLA). Ndị a bụ akụ ụlọ akụ nwere ike ịtụgharị ngwa ngwa ozugbo. Ndi ulo oru a gha echigharịkwuru ahia nke onwe iji mezuo uzo onwuru mmiri ya dika ihe nlere nke ndi anakpo 30 ubochi. N'ebe ahụ ka ịchọrọ Netanya Stable Funding Ratio chọrọ. Standardskpụrụ ndị a chọrọ ụlọ akụ iji debe profaịlụ nkwado ego maka ma oge mkpụmkpụ ma ogologo oge.
Azụmahịa Banyere Ala Na-emekarị
Banyere akụ na ụba na mba ndị ọzọ. A kọrọ na ihe karịrị nde ụmụ amaala 2.7 nwere ederede mba. Banlọ akụ azụmaahịa abụghị naanị maka 1% kachasị elu. Lọ akụ na ụzụ dịịrị onye ọ bụla chọrọ onye ọ bụla chọrọ irite uru dị iche iche. Ọtụtụ ụlọ akụ mba ọzọ na-enye obere ntinye ego dị ala. Ya mere, ha na-eme nhọrọ puru iche nye onye ọ bụla nwere mmasị ịhazi akaụntụ n'akụkụ mmiri.
Ọzọkwa, uru nke inwe ihe nzipụ akụ gafee ohere itinye ego na nzuzo iji zoo akụ gị. Uru ndị a na-emetụta nkezi onye ma nwee ike melite ahụmịhe ụlọ akụ gị kwa ụbọchị. N'ihe banyere nchekwa, nnweta, ịdị mma, na udo nke uche, ọ ga-adị ka ịpụpụ ụlọ akụ dịpụrụ adịpụ bụ ezigbo ngwọta. Onebọchị iche banyere ichekwala ego mba ofesi dị ka ụfọdụ ụzọ nchụpụ ụtụ isi ga - esi zere gọọmentị ụlọ gị. N’aka nke ọzọ, ọ bụ nke iwu, omume na omume mgbe emechara ya. Ọzọkwa, ọ bụ ezigbo nhọrọ, enwere ike ịdabere na ya, nke ga-adịgide adịgide maka ndị niile dị njikere irite uru na ya.
Gini mere iji muta akwukwo?
Ọtụtụ ndị Amerịka amaghị ihe ndị ụlọ akụ dị n’okpuru mmiri bụ n’ezie. Mana, ee, ugbu a bụ oge ịmalite ịmụ eziokwu banyere ya. Banlọ akụ dị na mba ọzọ bụ iji usoro nchekwa ego na mba dị iche na nke ị bi na ya; kachasị mma na ikike siri ike. Enwere ọtụtụ uru ego na nke iwu kwadoro na ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọnọdụ akụ na ụba na doldrums. Ọ nwere ike ịbụ n'ihi usoro ndozi gọọmentị na-adịghị mma nke kegidere na gọọmentị ji ụgwọ dị ukwuu, dịka na USA. N'aka ozo, o nwere ike idi, dika odida nke Washington Mutual, anoghi n'ulo oba ego nke dara ada ule ule.
N'ihi ya, ọ dị oke mkpa ịmalite nyocha ụlọ akụ dị n'okirikiri dị ka nhọrọ ziri ezi. Na sistemụ ụlọ akụ America na ọtụtụ ndị Europe jufere karịa, kachasị mma, ị nwekwara ike ịchọ nyocha ndị a anyị ga-atụle n'okpuru.
Kwụ offlọ akụ na-echekwa ego na-enye nkwanye ego maka ichekwa ego gị. Nke a bara ezigbo uru maka ijigide ọdụ nchekwa ogologo oge. Bankslọ akụ na-akwụ ụgwọ ụlọ ole na ole na-enye nhọrọ maka ijikwa ego dịgasị iche iche. Ijide akụ na mba ofesi n'ọnọdụ dị iche iche na-enye mmadụ ohere ịba uru nke jumps na mgbanwe ego. Mgbe ọdachi 9 / 11 gasịrị, ọtụtụ mmadụ mepere akaụntụ ụlọ akụ Canada ma gbanwee dollar US gaa dollar Canada. Ọtụtụ mere uru 30% mara mma ka dollar US na-arụ ọrụ na onye Canada siri ike. Yabụ, ijide ego dịgasị iche iche nwere ike ịdị iche iche itinye ego na nkwenye, na-eweta nloghachi dị elu n'ọnọdụ ụfọdụ ahịa na obere ihe egwu.
Ọ na-enye ohere maka ego dị iche iche. Ọ dịkwa mkpa ịtụle na mgbe US nọ na nkwụghachi ụgwọ na 2008, ahịa Eshia na-abawanye. Lim na-egbochi azụmahịa gị n'ụlọ na-egbochi gị. Yabụ, ịnwere ike ị nweta uru nke akụ na ụba na-eme nke ọma ebe akụ na ụba ụlọ gị nwere ike ọ gaghị adị. N'ezie, ị nwere ike ịtụle ịmalite otu akaụntụ mba ọzọ. Dịka nke a, ị nwere ike ijide onwe gị na ị na-eji ohere dị mma nke iwu ụlọ akụ mba ofesi dị mma. Dịka ọmụmaatụ na Switzerland, ụlọ akụ bụkwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka itinye ego. Banlọ akụ Switzerland na-abịa na ụfọdụ ndị isi ego n'ụwa. Yabụ, onye na-ahụ maka ịhazi ego na ụlọ ọrụ nwere ike ịtụnye Pọtụfoliyo nke na-enye nnukwu ngwakọta na nchekwa. US na-amachi ọnụọgụ azụmaahịa nke onye na-azụ ahịa ụbọchị nwere ike isonye. Offzụ ahịa n’okpuru wepụrụ okpu a.
Mmasị Mmasị Kasị Mma
Kslọ akụ dị na US na-enyekarị ọmụrụ nwa dị ala na nkwụnye ego. Dịka ọmụmaatụ, na ọnụego ahịa dị ugbu a, ọ bụrụ na itinye ego $ 1,000 USD na Jenụwarị, ị ga-eme naanị $ 10 mmasị maka afọ. Mayfọdụ nwere ike nwee afọ ojuju, ma ọ bụ nwee obi ụtọ, ịme ego ọ bụla na nchekwa ha. Ka osila dị, mgbe ị jiri nke a tụnyere ụfọdụ ụlọ akụ mba ofesi, ị ga - ahụ ego ọmụrụ nwa dị elu na ntinye ego gị. Anyị na-ekwu okwu masịrị gị iji mee ka ị melite akaụntụ naanị dabere na uru a. Ọnọdụ dịka Australia, Switzerland, Netherlands, na France nwere ike ọ bụghị naanị inye nnukwu ọmụrụ nwa na nkwụnye ego gị, mana edepụtara ha dịka ụlọ ụfọdụ akụ kacha mma n'ụwa nile.
Bugharịa Ego ọsọsọ
Tinyere imebiwanye akụnụba gị, ịnwe ọbụna obere akaụntụ na-enye gị ohere ịga ngwa ngwa. Ndị na-ejide akaụntụ na mpụga nwere ikike ịmegharị ego ha, ọ bụrụ na achọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnọ n'ọnọdụ ebe nchebe nke akụ na ụba pụọ ​​na ikpe dị mkpa. Na mgbakwunye, ị nwere ike inwe azụmahịa mgbe niile na azụmaahịa azụmahịa mba ofesi. Abụọ ndị a dị mkpa bara uru na nke ha.
N'akụkụ ndị a, anyị makwaara na ụlọ akụ na-ejikarị obere ego ejiri n'aka maka nkwụghachi ego buru ibu. Nke a na - eme ka ọ sie ike ịnweta ngwa ahịa gị niile ngwa ngwa. Ihe ịma aka bụ na ebe a bụ ọtụtụ ọnọdụ ebe ụdị mmachi a nwere ike ịdị na-egbu egbu na usoro nchebe. Gịnị mere ihe a ji dị mkpa? Nke a bụ ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ ego gị ọsọ ọsọ? Nke ahụ bụ, ịnwere ike inwe onye ọka iwu nọ n'azụ gị nke chọrọ iwepu akaụntụ gị ruo mgbe ụlọ akụ nyefere ya.
Yabụ, inwe akaụntụ dị n'akụkụ mmiri na-ejikọ aka nke onye na-emegide gị. Nwere ike ibugharị ego gị ọsọ ọsọ na / ma ọ bụ nwee usoro ịkwado ego dị n'azụ iji chebe gị.
Ikekwe otu echiche na-ezighị ezi banyere akụ na ụzụ ndị dịpụrụ adịpụ na-ezobe ego n'aka nwoke ụtụ isi ahụ. N'ikwu eziokwu, nke a abụghị eziokwu, ebe ọ bụ na akụ ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri na-emekarị ka a na-akwụ ụgwọ maka ụtụ isi. N'ikwu ya, e nwere ụzọ ụfọdụ ị ga-esi ejigide njide nzuzo dị iche mgbe ị na-eji akaụntụ mbupụ. Onye ọ bụla America na-akwaga ebe ọzọ $ 10,000 USD ma ọ bụ karịa, n'oge ọ bụla, ga-akọrịrị ya. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe akaụntụ na n'okpuru $ 10,000 USD na-enweghị ịkọ akụkọ. Do ga-agwarịrị gị ma ọ bụrụ na ị na-edebanye aka na akaụntụ mba ọzọ. Na agbanyeghị, anyị na-akwado gị ka gị na onye ndụmọdụ ụtụ gị kwurịtara okwu.
Ụlọ akụ na-enweghị nchebe bụ International
Ahụmahụ ịzụ akụ ka mma. Usoro ndozi Federal nke na-akwado ụlọ akụ US bụ, n'aka nke mba kachasị ụgwọ ji ụgwọ na mbara ụwa. Ọzọkwa, akwụkwọ mbipụta ego dị elu ewepụtala ndepụta nke ụlọ akụ kachasị echekwa gburugburu ụwa; ọ nweghị nke bụ ụlọ akụ US. Kpamkpam ọ dịghị. Were Magazin Global Ego, dịka ọmụmaatụ, Ha na-ahapụrụ ndepụta nke ụlọ akụ nchekwa kachasị mma nke 50 kwa afọ. Ihe na-awụ akpata oyi bụ na ọ kwaghị nnukwu ụlọ akụ America ọ bụla. N'ihe ederede a, naanị ụlọ akụ ndị America dị na listi “kachasị dị nchebe” bụ obere ụlọ akụ ugbo atọ, ha depụtara na nọmba 30, 45 na 50.
Dabere na Global Fiance, ebe a bụ mba nwere ụlọ akụ kachasị nchebe:
N'ime mba ndị a dị n'elu, naanị Switzerland na Luxembourg ga-emeghe akaụntụ na-enweghị mkpa ịga mba ahụ. Ego kacha nta gbara ọkpụrụkpụ. Onye na-erere akụ ga-emecha bịa na nke gị.
N'ụwa niile, ọ dị mfe ịchọta ụlọ akụ na mba ndị ụgwọ dị ala na-adịghị eji (ego) agaghị eji ego gị gbaa chaa chaa. Ọ bụ ya mere ha ji enwe ike idowe karịa ego n'aka gị. Mgbe ị tinyere ya n’ihe gbasara itinye ego, ebe ị ga-achọ itinye ego gị? N'ime ụlọ ọrụ na-egwu mmiri na ego? Ma ọ bụ onye mmiri ji iri? Mba ndị dị ka Switzerland na Luxembourg nwere ụkpụrụ iwu gbasara ụlọ akụ etiti. Ha na-eme ntinye "akwụkwọ ndenye ego na nguzozi" na usoro ndekọ ego ụlọ akụ. Ọtụtụ ụlọ akụ ndị ọzọ dị n'akụkụ mmiri na mba nwere sistemụ yiri ha. Usoro ndị a na - enyere aka n'ịhụ na ndị na - achọ ịnabata oke osimiri nwere ike ịme nke a n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Nchebe Ka Ukwuu
Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahụ maka ihe bara uru na - ekwu, mgbe ị na - akụ ọdụ ụgbọ mmiri, ị gaghị enwecha mmasị na akwụkwọ ikpe n'ụlọ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị kee ngwakọta nke akụ gị na akaụntụ ndị dị n'akụkụ mmiri, ọ ga-esiri ndị iro gị ike ijide gị. Nke a nwere ike ọgaghị emetụta mmadụ niile; mana buru n’uche na ọ ga - esiri mmadụ ike karị iwere akaụntụ gị na snap ma ọ bụrụ na ha anọdụ n’ụlọ akụ. Maka nchekwa ogologo oge, ndị ọkachamara na-akwado ijide akaụntụ gị na ụlọ ọrụ dị na mpụga na / ma ọ bụ ntụkwasị obi. Ijide ego na ngwaọrụ ndị a abụghị naanị inye nzuzo. Ha nwekwara ike ịnye oke iwu dị mma ma ọ bụrụ na ụlọ ikpe nyere iwu iweghachi ego ahụ.
Ịtọlite ​​Akaụntụ Akaụntụ
O yikarịrị ka nke a ọ bụghị ihe ijuanya. Ọ na-esikwu ike karị na ndị America ịhazi akaụntụ ndị dị n'okirikiri. Ozi a dị mkpa nke ukwuu. Ya mere, ọ dị mkpa ịrịọ onye ọkachamara nwere ahụmahụ ka ọ chọta akụ kacha mma maka gị. Nke ahụ bụ ọrụ nzukọ anyị na-enye. Anyị maara ụlọ akụ ga-anabata ndị ahịa si mba ọzọ. Anyị nwere mmasị na akụ ndị anyị chere na ha siri ike ma dịkwa nchebe nke na-enye ọrụ kachasị mma.
Ihe ụfọdụ ị ga - achọ:
Nnweta maka ndị ahịa America. Ọ bụghị ụlọ akụ niile ka na-anabata ndị ahịa America, Canada na European.
Ikike imepe akaụntụ na anwa. Enwere ụfọdụ ụlọ akụ esenidụt nwere nhọrọ maka ndị ahịa imeghe akaụntụ n'ịntanetị ma ọ bụ ekwentị. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị ga-enyekwa akwụkwọ ikike iwu chọrọ. Bankslọ akụ ndị ọzọ chọrọ ka ị gaa n'ụlọ akụ ha ozugbo iji mepee akaụntụ. Nke ahụ kwuru, ụfọdụ n'ime ụlọ akụ ndị ahụ nwere alaka ụlọ. Ya mere, ụfọdụ ga-enyere gị aka ịhazi akaụntụ mba ofesi site na ngalaba mpaghara. Nsogbu a bụ na ụlọ ikpe ndị dị na United States nwere ikike n'ebe ngalaba mpaghara dị. Ya mere ọ dị mkpa iji akụ nke na-enweghị ebe ndị US kwekọrọ.
Obere obere. Ọtụtụ ụlọ akụ chọrọ obere ego iji mepee akaụntụ (nke ahụ na-aga maka ụlọ na mba). Yabụ ịchọrọ ịchọ ụlọ akụ nwere obere ihe kpatara gị.
Ndị ụlọ akụ nwere ndị ahịa obodo yana ndị ahịa si mba ọzọ. Can nwere ike ijide n’aka na a ga-enyocha ụlọ akụ na-enye ndị obodo ọrụ aka ha nke ọma. Banklọ akụ nwere naanị ndị ahịa si mba ọzọ, a na-akpọkarị ya ụlọ akụ “Klas B”. Enwere ike ileghara ụlọ akụ ndị a mfe karịa site n'aka ndị na-achịkwa ego. Bankslọ akụ “Klas A” nwere ike ịnabata ma ndị na-edebe ụlọ na ndị mba ọzọ.
Ọtụtụ ụlọ akụ mba ọzọ nwere iwu nzuzo nzuzo siri ike ma anaghị ekpughe ozi akaụntụ. Reportingtụ ụtụ isi, mana, bụ ihe dị iche. Financiallọ ọrụ na-ahụ maka ego mba ụwa nwere oke maka itinye akwụkwọ n'ụdị ụfọdụ maka ndị bi na ndị US. Ime nke a na-enyere ha aka irube isi n'iwu ụtụ isi US. Ọrụ dịịrị n’aka onye nwe akaụntụ ahụ ịre ọfụma. Mgbe ị na-emebe akaụntụ nke dị na mmiri ị ga-achọkwa iburu iwu ụtụ isi bụ isi. Ọ dị mkpa iburu n'uche, na nke a, nke a pụtara ga - enye aka ozi ọ bụghị naanị ndụmọdụ ụtụ isi. Ọ ga-agbanwe. Yabụ, buru ụzọ chọọ ndụmọdụ n’aka onye mgbazinye ego ikike. Nke a na-ekwu, a na-atụ aro ka ndị America buru ihe ndị a n'uche.
Ị ghaghị ịkọ akụkọ zuru oke n'ụwa niile. Nke a na-emetụta ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-atụ ụtụ isi ụtụ isi na ego gị. Idebe ego n'elu ebe ọzọ ma na-akwụ ụtụ isi mgbe ị weghachite ya kwụsịrị na 1964. Nnukwu ụlọ ọrụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ ndị nwere ọnụ ahịa nwere ike ịhapụ nke a; ma ọ bụghị onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere njikọ chiri anya.
Ị ga-akọrọ akaụntụ ụlọ akụ mba ọzọ ọ bụla karịrị $ 10,000 USD. Nke a bụ mgbakwunye na akwụkwọ ego gị. Y’oburu na inwere akpu akpu karie iri puku dollar, ikwesiri ide akwukwo FBAR.
Ego mbata. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ọ bụla (ego, nkwụsị, enweta, nkwụsị, nha, na nkesa) na ihe ọ bụla ala ọzọ dị elu karịa $ 50,000 USD n'ụbọchị ikpeazụ nke afọ ụtụ ma ọ bụ $ 75,000 USD n'oge ọ bụla n'ime afọ, ị ghaghị tinye faịlụ 8928.
Ịkwụ ụgwọ na mmasị maka ịkọ ụtụ ụtụ gị na-ekwesịghị ekwesị. Onweghi ukpuru iguzogide onwu. Ntaramahụhụ nwere ike ịdị site na $ 10,000 ruo narị puku kwuru puku. Asiontụ ụtụ isi, ịkọ akụkọ ụgha, na ịghara ịkọ akụkọ nwere ike inye ntaramahụhụ siri ike. Yabụ hụ na irubere iwu ụtụ isi niile.
Ime Mkpebi Ziri Ezi
E wezụga na ihe ndị a niile, ị ga-eburu n'uche na ọ dịghị onye ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ maka onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị chọrọ nnukwu bank ndị nwere nnukwu ohere ịdọrọ, ndị ọzọ nwere ike ịchọ "uru nchekwa".
N'adịghị ka nkwenye a ma ama, ịhapụ ụlọ akụ na-efe efe abụghị banyere ịbubata ụtụ ma ọ bụ izo ihe gị. Ọ bụ ihe gbasara iwulite azụmahịa gị yana ịchekwa akụ site na imebi ịgba ọsọ. Nke ahụ bụ, ọtụtụ mmadụ na-ewepụta akaụntụ azụmaahịa iji rite uru na usoro iwu mba dị mma.
Enweghi Nchekwa n'ofufe Karịa Osimiri
Ka oge na-aga, eziokwu, ọ dị ka ajụjụ a pere mpe "kinglọ akụ mba ofesi ka m nwee?" Na ndị ọzọ "Ọdịmma ụlọ akụ ụlọ dị mma maka m?" Nke a abụghị ihe ọkụ ọkụ. Nke a bụ nsonaazụ a na-akwụ ụgwọ nke sistemụ ụlọ akụ na-eme mkpọtụ. Ọ bụ usoro gọọmentị ji ụgwọ ụgwọ; Ọchịchị nke na - ere ọkụ site na ego ndị mmadụ.
Ka ọ dị ugbua, ndozi gọọmentị etiti nọ na nsogbu. Ọ bụrụ n ’echiche ọzọ, were ya na ụlọ ọrụ dakọtara na mba ndị na-enweghị ụgwọ zuru oke. N’ezie ajuju a abughizi gbasara ụlọ akụ dị n’obodo dị nchebe. Ajụjụ anyị kwesịrị ịna-ajụ bụ nke a. Kedu ụlọ akụ dị n'akụkụ mmiri anyị kwesịrị iji maka uru onwe anyị, iwu, azụmahịa, na ego anyị?
Banyere akụ na ụba na-enye ohere maka ịba ụba nzuzo. Ọtụtụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na-eji uru nzuzo a eme ihe. Ndị bi na United States nwere ike ịnụ ụtọ ụgwọ ọrụ ego ndị a na ndị a na-azụ ahịa site na ịgafe akụ na mmiri.
Ikpuchido ego gi site na ịgba alụkwaghịm, ikpe na ọgụ metụtara iwu bụ ihe ọzọ kpatara ya. Nwere ike mepee ndekọ akụ na-akụkarị n'azụ ụlọ ọrụ iji nye nzuzo na nchedo kacha. Ihe ndekọ ego dị n’obodo abụghị naanị maka ndị aka ji akụ. Enwere ịrị elu dị iche na ọnụọgụ ndị America tinye ego ha na akaụntụ ego nkeonwe. Ebumnuche nke ederede a bụ iji nye nghọta na ozi banyere isi okwu a.
Nkwupụta nzuzo nke Akaụntụ Banki
Imirikiti ikike ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ akụ nwere oke iwu nwere iwu na ụkpụrụ nzuzo siri ike. Ndị a nọ ebe a iji nyere aka hụ na njirimara nke ndị na-edebe ha na ndị na-etinye ego yana azụmahịa ndị metụtara ya nwere nzuzo. Nke ahụ bụ, nyocha ịchọrọ anya ma ọ bụ anya efu agaghị enwe ike ịtụle ihe gbasara ego gị. Ọ bụ ezie na nzuzo a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ ifo, ọ gaghị ekwe omume ịghara ikwe nkwa nzuzo na nzuzo. Alllọ ọrụ niile na-akpata ego n'ụwa niile nwere ọrụ dị mkpa n'iwu. N'ihi nke a, ha ga-eme mkpesa ma gbasoo nyocha maka ebubo mpụ dị ukwuu. N'ezie, nke a gụnyere iyi ọha egwu, ịda ego, ma ọ bụ mkpụrụ nke azụmaahịa ọgwụ iwu akwadoghị.
Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, enweghị akwụkwọ ebubo eji eme ihe ike. Yabụ, a na-echekwa ihe nchekwa ozi n'ụdị ekworo. Ndị a nzipụ akụ Ejiri ikike ịnye ihe kachasị na nzuzo, ma jee ozi iji kpachapụ ma chekwaa ozi. Ihe nzuzo a dị elu kwesiri ekwesi dị ka ọ na-emetụta ichebe akụ na ụlọ ịgba akwụkwọ. Iji maa atụ, okwu obodo dịka ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ ala ndị agbagha bụ ọgụ na-alụ kwa ụbọchị n'ụlọ ikpe.
Ọ bụ n ’enweghị mmasị nke ụlọ akụ ịkọwapụta ihe nzuzo ma ọ bụ nke ịna-edebe ihe. Dika odi, ha emeela dika ndi azu azu na oge ule siri ike ndi choro ka ndi ochichi. Ọnọdụ ọ bụla nke na-agbapụta ma ọ bụ mebie ihe nzuzo ọ bụla ga-enyere aka imebi ntụkwasị obi nke ndị nwere akaụntụ ọ bụla. Dị ka ndị a, ha ga-eguzozi na nnukwu ego nke azụmahịa ụlọ akụ.
Obido n’adiri omimi na ihe nzuzo ka odi. Otu nwere ike ịkwalite nzuzo site na ụgbọ ala na-ejide akụ dị ka asslọ ọrụ International Business (IBCs) ma ọ bụ ntụkwasị obi nke Oke. Ngwá ọrụ ndị a na-enye ọtụtụ ugwu nchebe ma e jiri ya tụnyere “imepe ụlọ akụ.”
The ihe mgbaru ọsọ nke onye ọ bụla na-achọ imeghe otu akaụntụ akụ ma ọ bụ karịa nke dị n'okirikiri kwesịrị ịbụ nke a. Iji mee ka itule kwesịrị ekwesị n'etiti nchebe bara uru, nzuzo, nchekwa, yana ịnweta ọ dị mkpa ịnwe nduzi. Jide n'aka na ị ga - ejide onye na - ahụ maka onye na - ahụ maka ịchọta nsogbu dị mma maka gị.
Ozi nkowa mgbakwunye Banyere Offshore Banking
Enwere ike ịchọta ikike ndị ama ama maka ihe ndekọ ego ụlọ ọrụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa ihiwe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịpụ ahịa iji nweta akaụntụ akụ nke mba ọzọ. Ikike ndị na-enye ihe nzuzo kachasị maka ndị nwe ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri apụtaghị n'otu ikike ahụ dị ka ndị na-ahụ maka akaụntụ bank. Otu nwere ike ịnya ụgbọ ala Mercedes. Mana ụgbọ ala ahụ enweghị taya Mercedes. O yikarịrị ka ọ ga - anagide Goodyear, Firestone, Continental nke taya Michelin.
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-eji ngwaọrụ akụrụngwa kachasị mma họrọ ikike. Mgbe ahụ ịchọrọ ịhọrọ ikike na ụlọ ọrụ ego kachasị mma na-egbo mkpa gị.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike inwe ụlọ ọrụ na agwaetiti Nevis yana akụ na Switzerland. Iwu ụlọ ọrụ Nevis na-enye ohere nzuzo kachasị. Switzerland na-enye njikọ kachasị ike nke nchekwa akụ na nzuzo ego. Ọ dị oké mkpa iji guzobe nchikota kwesịrị ekwesị maka mkpa gị ụfọdụ.
Soro na igwe mmadu
OffshoreCompany.com bụ ikike ụwa n'ime ọrụ dị n'ụsọ. Specilọ ọrụ ahụ amatala na nzuzo nzuzo nke ego na atụmatụ nchekwa nke ndị na - ege ntị zuru ụwa ọnụ. Companylọ ọrụ ahụ anọwo na ya kemgbe 1906. Anyị na-agba onye ọ bụla na-achọ ahịa ume ka ọ chọọ enyemaka nke onye nkuzi ọrụ tụkwasịrị onwe ya. Nwere ike ịkpọtụrụ ya site na iji nọmba ekwentị ma ọ bụ mpempe ndụmọdụ na ibe a.
Imepe akaụntụ nke dị na mba ọzọ na-eweta nhọrọ ọzọ na nke iwu kwadoro iji kpuchido ego gị. Companylọ ọrụ a anọwo na ebe ahụ kemgbe 1906.
Robert Kiyosaki, onye ọchụnta ụwa ama ama, onye na-azụ ego na onye edemede NY Times kwuru nke a. “Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga otu ebe, ọ kacha mma ka ị chọta onye rutela ebe ahụ.” Mgbe ndị ọ na-enweghị ego na-ekwu okwu, ọ na-abụkarị ihe amamihe dị na ha ige ntị.
Dika ekwuputara n’elu, odika, nde 2.7 ndi America nwere ego ha na akaụntụ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị US, ndị ọchụnta ego bara ụba na ndị a ma ama na-ejikwa ya mbupụ ala ohere. Ọnụọgụ a gụpụrụ ụmụ amaala US 7.6 bi na banks ná mba ọzọ, dịka Ngalaba Ọchịchị United States kwuru. Ọzọkwa, agunyeghi na mkpokọta a, ọnụ ọgụgụ ndị agha US na-ebi gburugburu ụwa. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala US ma ọ bụ onye mbịarambịa bi na mba ofesi. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, ọtụtụ mmadụ nwere ike rite uru na iwu ma ọ bụrụ na ịnwe akaụntụ dị n'akụkụ aka nri
Ego Unsavvy nke US
Ọdachi ụlọ ikpe azụ gara aga na US mere na 2008. N’oge a, ụfọdụ ụlọ ọrụ bank na-akwụ ụgwọ buru nnukwu ego. Nke a bụ n'ihi usoro aghụghọ nke ndị ọrụ America na-arụ ọrụ. O zigara ndị mmadụ ụjọ ụwa niile. Ọtụtụ ijeri dọla na ego na ego ezumike nka furu efu. Ọdachi ahụ mere ka ọtụtụ mmadụ daa, nwee mmalite. Onye ga-ekwu nke ahụ agaghị eme ọzọ?
Tupu oge ahụ, ahịa ngwaahịa US dara na 2000. A maara nke a dị ka “dot com afụ,” ka ị na-echeta. Mgbe ahụ enwere ụbọchị ahụ a ma ama na Ọktoba 19, 1987. Anyị na-akpọ ụbọchị ahụ “Black Monday” ma bụrụkwa nnukwu mbibi ego otu ụbọchị na akụkọ ntolite America. O mere ka ihe karịrị ijeri dollar 500 kwụpụ ahịa ahịa. Tupu mgbe ahụ, ọrịa ọgbaghara kachasị ama ama ama bụ Nnukwu Ndagide na 1929. Ihe agbakwunyere na nke a bụ ọtụtụ nkwụghachi ụgwọ n'etiti ugbu a na nke ahụ emebiwo nnukwu ego nke nde ndị America.
Ọzọkwa, US bụ mba kachasị ụgwọ ji ụgwọ n'ụwa. Dika mmasị na nsogbu nke ụgwọ mba dị na ya, ọdịiche nke ọtụtụ ihe ụnwụ ego na United States na-emekwa. Nke a gụnyere ndakpọ akụ… na ego gị nwere ike ịbanye. Atụkwasịla obi na FDIC agaghị agba gị ụgwọ. Insurancelọ Ọrụ Federal Deposit Insurance (FDIC) bụ ụlọ ọrụ gọọmentị United States na-enye ndị nkwụnye ego nkwụnye ego mkpuchi ego n'ụlọ akụ US. Nanị nsogbu bụ na, ee, mba ndị nwere ụgwọ ji ụwa niile na-akwado ya.
Mee Ihe Ndị Ọgaranya na Ihe Ọmụma
A maara ebe niile na itinye akwụkwọ ego gị n'ụdị bụ ụzọ kwesịrị ekwesị iji gaa. Itinye ego gi na akako, ego ndi mmadu na ego ya, ihe ndeputa ya na ala na ulo bu nani uzo ole na ole maka ndi na etinye ego. Mana ọ bụrụ na ego ndị ahụ niile dị na USA, enwere ike ịkwatu ha otu mkpọ ala. Ma ọ bụrụ na itinye ego ọdịda US ọzọ nwere ike ịdalata ntakịrị uru ha bara.
Ọ bụrụ na enwere nhọrọ nhọrọ ego ndị ọzọ?
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ndị ọzọ iji tinye ego, chekwaa ma mee ka akụ na ụba gị dị ọtụtụ? Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnwere ego ga-agbakwunyere nke ịnwe ezigbo ihe nzuzo nke itinye ego gị?
Ọ bụ ebe ahụ ihe ndekọ ego ụlọ akụ Bata.
Iji gosipụta oke uru ahịa ahịa azụmaahịa dị, ego karịrị ijeri $ 32 puku dollar ka etinyegoro na akaụntụ. Ndị na-etinye ego na Savvy ghọtara na US abụghị ma ọ bụghị ebe a na-aga “ebe a” iji nweta ego ha. N’ezie, n’ihe banyere nchekwa akụ, US na - akwụ ụgwọ na - ezighi ezi na ndepụta nke ụlọ akụ kachasị echekwa ụwa.
Dịka anyị kwuru n'elu, dị ka ndepụta nke ego zuru ụwa ọnụ nke "ụwa 50 Safest Banks 2015," US nọ na #30, #45 na #50 na ndepụta nke ụlọ akụ kachasị mma n'ụwa! Obere obere ụlọ akụ na-arụ ọrụ ugbo, AgriBank, CoBank na AgFirst bụ naanị ụlọ akụ US nke mere ndepụta ahụ. Bankslọ akụ ndị imirikiti ụmụ amaala US na-eji maka ego, Chase, Citi na Bank of America anọghị na ndepụta ahụ.
Na-eme ka ị na-eche…
Ibelata obere ego karịa ego mgbapụta kwa afọ na-eleda ya. Inwe ohere dị ize ndụ itinye ego n'ahịa na ngwaahịa na-abụghị ihe ị ga - eme iji nweta ego gị.
Nrọ Nrọ America
Ohere inweta bụ na ị na-agbasi mbọ ike kwa ụbọchị. Inwere ike ịzụ ahịa, kwụ ụgwọ ego ahụ, ma werekwa ego nke ọma. Ego ị hapụrụ na chekwaa (ma nwaa itinye ego na ebere nke ngwaahịa ahịa) bụ akwu akwụ gị. Nke ahụ bụ ezumike nka ezumike nka, na nrọ gị ibi ndụ kacha mma.
N'oge ọ bụla, ndị ọka iwu na-ahụ anyaukwu nwere ike ịkwụsị akaụntụ nke akụ gị na-eme ka ị nweta ego gị. Okwu banyere IRS, ịgba alụkwaghịm, ụgwọ ụlọ ọgwụ akwụghị ụgwọ, okwu banyere nwatakịrị ma ọ bụ ikpe ọ bụla megide gị nwere ike ime ka e kpochapụ akaụntụ akụ gị n'okpuru gị.
Ọbụna ịlụ nwanyị ma nwee ike ịgba alụkwaghịm apụtawo na ọ kpatara oke mbibi ego, na ọtụtụ anaghị agbake na. N'ihi gịnị? N'ihi na akụ gị niile nwere ike ịbụ na US. Dika odi, a na-ahụ anya ma na-enwe ike ịta ikpe ma na ịnagide mmadụ, na-ahapụ gị n'ụlọ ogbenye.
Ingkwụsị alụmdi na nwunye bụ ihe mgbu nke mmụọ, ee. Ma ọ na-emebikwa ndị mmadụ ego. Usoro ịgba alụkwaghịm nwere ike were ọtụtụ afọ ikwubi. Otu nwere ike imebi iri puku kwuru puku ma ọ bụ ọbụna nde kwuru nde. E mesịa, ọ nwere ike ịhapụ gị ịnwe pere mpe nke ihe ị rụrụ. Consciousmata nke a mere ka ị mata ihe mere eme. Ọ bụ ihe ọzọ kpatara iji ekenye ụfọdụ ego gị na akaụntụ nnweta nke dị n'ime ngwaọrụ iwu siri ike. N'ime ya, ị ga - egbochi ya ka ọ ghara imerụ ahụ.
Imepe akaụntụ na-apụ apụ na-enye gị nnwere onwe idobe ego gị ma ghara ịpị ndị anụ ụlọ.
Positive Financial Outlook
Thelọ ọrụ mgbasa ozi akpọwo akụkọ ndekọ nke ndị dị n'ụsọ mmiri dị ka “ebe nchekwa ụtụ” ma ọ bụ “ebe ndị mmadụ na-atụ ụtụ isi. N'ihi na enwere otutu uru itinye ego na bekee. IRS emeela ka o siere ndị na-achọ uru ego aka — IRS chọrọkwa òkè nke ya.
Na 2009, ọgbakọ ọgbakọ ahụ gafere Iwu Nkwanye Taxtụ Isi na Akaụntụ (FATCA). O kwupụtara, dị ka ọ dị na mbụ, ụmụ amaala US ndị bi ná mba ọzọ kwesịrị iji IRS tinye akwụkwọ ụtụ ha. Ihe ohuru bu ihe obula bu na ulo oru ego nke mba ofesi choro ikpughere ndi ahia ha ndi US nke ha na ha bi. Ihe kacha nweta ozi ọma na obodo a bụ Switzerland. Akaụntụ Switzerland Bank nwere, ma ka nwekwara ama dị egwu. Switzerland bụ nnukwu mba eji etinye ego ma ọ bụ chekwaa ego. A maara ya maka nchekwa nchekwa akụ na plethora nke nhọrọ itinye ego. Iwu ndị a wee bụrụ nke chi. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ b ụ ihe nzuzu mmadụ ịta onye US ebubo ịchụpụ ụtụ ahịa nke oke osimiri. Mgbe ụlọ akụ ha jiri mee ihe maka ịkpesa, ịtụpụ ụtụ isi erughị obere okwu. Yabụ, ọ na-eme nnabata site n'aka ndị US na ọ kacha mfe.
Enwere ọtụtụ iri nke mba ndị ọzọ, na mgbakwunye Switzerland, itinye ego gị.
Biko mara na ọ bụ iwu zuru oke itinye ego n'ime akaụntụ. Citizensmụ amaala US kwesịrị ịkọrịtara uru ahịa ha dị na IRS. Nke a bụ ihe dị mfe nke mbọ gị maka ime n’oge oge ụtụ. Mana rịba ama na ndị CPA na ndị ọka iwu ndị ghọtara iwu ụtụ isi ụlọ akụ nwere ike inye aka. Ndị maara iwu ọhụrụ ndị a nke ọma, ha ga-esonye gị n'usoro mkpesa dị mfe.
Idobe ego gị niile n'usoro nchekwa akụ US ugbu a bụ ihe oge gara aga, enweghị nchekwa na ịhazi otu ụzọ itinye ego. Kedu ihe kpatara nkwụnye ego gị maka enyemaka nke usoro aghụghọ, nrụrụ aka, nke tara akpụ?
Imepe akaụntụ na ọdụ ụgbọ mmiri abụghị ihe siri ike. Agbanyeghị, enwere iwu na ntuli aka ọhụrụ iji wụpụ, yana ọnụọgụ nke anoghi anoghi ahia ndị anaghị anabata ndị na-edebe US, Canadian ma ọ bụ Australia. Ya mere, a na-atụ aro nke ukwuu ịchọ ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe nke ụlọ akụ na-agafe agafe.
Interested nwere mmasị ịchọpụta ihe? Ọ bụrụ otu a, anyị bịara ebe a iji nye aka. Enwere mpempe ndụmọdụ na ibe a ị nwere ike mezue ugbu a. Na mgbakwunye, enwere nọmba ị ga-akpọ iji gwa onye ndụmọdụ nwere ahụmahụ. Alala azụ iji ohere ndị a ma gakwuru anyị maka enyemaka.
Isi nke 2>
Banyere akụ na ụma
Ọchịchị kacha elu
Ndị na-arụ ọrụ n'ụsọ oké osimiri
A na-atụkwasị aka na Offshore
Ihe nraranye nke na-enye ndị ahịa anyị obi ụtọ, maka akwụkwọ ndekọ ziri ezi, maka ọrụ oge maka ihe ndị ahụ anyị na-achịkwa, na ijere mmasị ndị ahịa anyị nwere mmasị.
Arịrịọ Ama Ama
Kedu ọrụ ị chọrọ?
Nchekwa akụ na iwu Nlekọta ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ US Banyere akụ na ụma Nkwado Ntụkwasị Obi Nkwadebe ụtụ Ndị ọzọ
Ozi gị nọgidere na nzuzo amụma nzuzo